Shiinaha Warshad caday jilicsan oo jilicsan warshad caday iyo soosaarayaasha | Enyuan
Burushka cadaygan lammaanaha ah waxaa si gaar ah loogu habeeyay laba madax oo burush oo u eg badh-qaabeeyayaal ah, kuwaas oo lagu darayo qaab dhammaystiran oo wadnaha u eg. Madaxa burushka waxaa loogu talagalay Xiaoqiao, oo ku habboon oo dabacsan si loo nadiifiyo ilkaha geesaha
magaca sheyga Labada caday
Astaamaha Nadiifi, ilaali xanjada
Dhexroor cadayo 0.01mm
0.01mm dhogor xariir fiican
Dhexdhexaadinta cirifka ee fiilooyinka burushka ee yar yar sida 0.01mm ma nadiifin karaan oo keliya nabarrada dusha sare ee ilkaha, laakiin sidoo kale waxay si qoto dheer u dhex geli karaan sulcus cirridka iyo meelaha dhexdhexaadka ah; fiilooyinka jilicsan ee jilicsan ayaa si tartiib ah u daryeela cirridka, iyagoo ka dhigaya ilig kasta mid saafi ah oo nadiif ah sida jacaylka iyadoon laga tegin wasakhda
Qalabka burushku wuxuu qaataa midabka madow iyo caddaanka ah ee caadiga ah, naqshadeynta waa mid fudud oo raaxo leh, jirka oo dhanna wuxuu ka samaysan yahay caag heerkiisu yahay cunno, oo raaxo ku leh taabashada.
Sidee si sax ah loogu cadayashaa ilkaha?
Waxaa lagugula talinayaa inaad bedesho cadayga mudo seddex bilood ah. Muddo dheer haddii la isticmaalo burushka cadayga, ayaa si sahal ah u cabiraya xoqidda, hoosna u foorari doonta, awoodda nadiifintuna way yaraan doontaa. Isla mar ahaantaana, madaxa burushku sidoo kale waa goob ay ku timaado bakteeriyadu.
1: Xuubka ilkaha iyo ilkuhu waxay u janjeeraan xagal dhan 45 °, tartiib tartiib ah cadaadiya, cadaya 4-6 jeer oo isdaba-joog ah buraashna toosan.
2: caday dhinaca kore ee ilkaha kore iyo hoose marka hore, ka dibna caday dhinaca gudaha ee ilkaha, adigoo cadayga u dhaqaajinaya hore iyo gadaal.
3: cadayo dusha calalinta, dhig burushka cadayga si siman, u caday cadayga gadaal iyo gadaal si kooban, oo si taxaddar leh u nadiifi ilkaha.
4: cadaya buurta gadaasheeda si aad u cadaadinaysid, waxaad ubaahantahay inaad cadayato qeybta hore ee burushka gudaha iyo dibada.
5: Ugu dambayn, caday carrabka, si tartiib ah uga cadayo saldhiga carrabka ilaa caarada carabka si aad uga saarto daaha carrabka oo aad uga saarto bakteeriyada.
6: ilkahaaga ugu cadayo tayo sare ilaa sadex daqiiqo markasta si neeftaadu u ahaato mid cusub.
Hore: toban kun oo caday timo ayaa si jilicsan loogu talagalay ma dhaawici karaan ciridka
Xiga: buraash jilicsan oo jilicsan caday madaxa burush yar
Caday madax-jilicsan oo jilicsan